के प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर छ ?
हावा र पानी विषाक्त भएर सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारको चेत खुलेको छैन। कयौं प्रमाण छन्, जसले वातावरण संरक्षणप्रति सरकारको खेलाँची प्रष्ट्याउँछ।
कसरी संसारकै उच्च वायुप्रदूषित शहर बन्यो काठमाडौं ? मौसमी अवस्थाका कारणले प्रदूषित हावा उपत्यकाभित्रै ठप्प भएर निस्कन पाएको छैन। त्यसमा आगो बाल्दा निस्किएको धुँवा, डढेलो, उत्तरी भारतबाट भित्रिएको औद्योगिक प्रदूषण र सवारी साधनको उत्सर्जन थपिएपछि काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तर असाध्यै खतराको तहमा पुगेको छ।
कोरोना महामारी, त्यसमै थपिंदैछ हिउँदमा वायु प्रदूषणको डरलाग्दो जोखिम जाडो महीनामा हुने वायु प्रदूषणले नेपाल र भारतको कोरोना महामारी विरुद्धको संघर्षलाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।
कोभिड–१९ ले मानवतावादी नयाँ विश्व व्यवस्थामा जान झक्झक्याएको छः प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र यसको सामना गर्न सरकारले निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य, नीति र कार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन्।
वातावरणीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणः यहाँ छन् चुनौती ‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ तर्जुमासँगै वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । तर, अधिकार कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधानमा स्थानीय र संघीय सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाललाई नेतृत्व लिने अवसर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुकूल राष्ट्रिय नीति र विदेशी सहयोगलाई सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण कार्यमा यस क्षेत्रकै नेतृत्व लिन सक्छ।
यो वर्ष मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा, अहिलेसम्म कहाँ कति वर्षा भयो ? यस वर्षको मनसुन सकिन एक हप्ता बाँकी रहँदा मनसुन अवधि (१९ जेठदेखि ११ असोजसम्म) मा सरदरभन्दा केही बढी वर्षा भएको छ। देशका ५१ वटा वर्षा मापन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष २२९.४ मिलिमिटर बढी वर्षा भएको हो।
विकासको स्रोत हुनुपर्ने नेपालका नदीले किन विनाश निम्त्याउँछन् ? नदी पृथ्वीको गतिशील, रोमाञ्चक अनि सुन्दर परिदृश्य त हुँदै हो; त्यति नै खतरनाक र अनिश्चित शक्ति पनि हो । नदीप्रतिको हाम्रो व्यवहारले यसबाट लाभ या जोखिम हुने निर्धारण गर्छ।
रुपन्देहीको तिनाउ नदी खतराको तह भन्दा माथि लगातारको वर्षापछि खोला तथा नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार रुपन्देहीको तिनाउ नदीले खतराको तह पार गरेको छ।
घर पहिरोले बगायो, पीडित परिवारको खोरमा बास पहिरोले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि निसीखोला गाउँपालिका–५ कारीगाउँका एक परिवार कुखुराको खोरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका छन्। गत साउन ३१ गते राति माथिबाट खसेको पहिरोले घर पूर्ण रुपमा क्षति भएपछि निसीखोला गाउँपालिका–५ कारीगाउँका हिराबहादुर बिकको परिवार अहिले कुखुराको खोरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका हुन् ।
बञ्चरे डाँडा ल्याण्डफिल्ड साइडको निर्माण कात्तिकमा सम्पन्न हुने
काठमाडौं र ललितपुरको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माणको काम दशैअगाडि नै सम्पन्न हुने राज्यमन्त्री मानन्धरले बताए।
विश्व सम्पदा सूचीको निकुञ्ज क्षेत्रमा सेनाको लापरबाही, मेशिनरी उपकरण चार वर्षदेखि इम्जा तालमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने इम्जा तालको पानीको सतह घटाउन २०७३ सालमा लगिएका मेशिनरी औजार हटाउन युनेस्कोले पटक–पटक चासो राख्दै आए पनि फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन।
सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन शहरी वातावरण र जलवायुको विषय ? प्रदूषणले आक्रान्त शहरी क्षेत्रको वातावरण सुधार र शहरी क्षेत्रबाट हुने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौतीको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नै परेको छैन ।
विश्वमा घटेको वन्यजन्तुको व्यापार महामारीपछि पनि कायम रहला ? विश्वमा प्रत्येक पाँच मिनेटमा एउटा सालकको अवैध शिकार हुन्छ। दाह्राको लागि प्रत्येक १५ मिनेटमा एउटा हात्ती मारिन्छ। त्यस्तै प्रत्येक १५ घण्टामा एउटा गैंडा मारिने तथ्याङ्क छ।
मनसुन सकिन अझै एक महीना लाग्ने, अहिलेसम्म कति प्रतिशत भयो वर्षा ? मनसुन अवधि सकिन करीब एक महीना बाँकी रहँदा ७८.७२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार १८३.१५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यो सरदर वर्षा भन्दा २१ प्रतिशत अर्थात् ३१५ मिलिमिटर कम हो।
हरित जलवायु कोषबाट नेपालले करिब तीन अर्ब पाउने गण्डकी वेशिनमा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपालले करिब रू. तीन अर्ब (२७.४ मिलियन डलर) पाउने भएको छ ।
संरक्षणकर्मीका लागि सुखद समाचारः अझै थुप्रै बाघ थेग्न सक्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरिएको हालैको अध्ययनले ती निकुञ्जले थप बाघ थेग्न नसक्ने आशंका गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले चितवनमा ९३ र पर्सामा १८ वटा बाघ छन्।
बाघ संरक्षणमा नेपाल विश्वमै नमूना, तर चुनौती बाँकी नै छन् सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने विश्व प्रतिबद्धताको अत्यन्त निकट नेपाललाई सफलतालाई जोगाइराख्ने ठूलो चुनौती छ ।
यस कारण सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोको जोखिम बढी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बेलायतको दुरहाम यूनिभर्सिटीसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार, २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमध्ये सिन्धुपाल्चोक पहिरोको उच्च जोखिममा छ।
वन्यजन्तुलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सडक ‘पास’ पछिल्लो तीन वर्षमा करीब ४०० वन्यजन्तुको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो । वन्यजन्तुलाई सडक पार गर्ने बाटो बनाइदिंदा यस्तो मरण घटाउन सकिने चितवनको अनुभवले सिद्ध गरेको छ र अन्यत्र पनि यसैलाई पछ्याइँदैछ ।